KISS: Ihe di mfe bu igodo ibi ndu
Omenkà na ihe osise Nick Dewar nwụrụ n'izu a. Ọ rụụrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche ọrụ Nke Atlantic Monthly gaa Random House, na-enye nkọwa ndị nwere nghọta maka okwu na-atọ ụtọ n’otu edemede ma ọ bụ akwụkwọ. Ọrụ Nick Dewar kachasị amasị m na-egosipụta ma ọkachamara na nkà ihe ọmụma onwe onye m:
Ihe dị mfe bụ isi ihe na-eme ka ndụ na-aga nke ọma.
Nke a bụ ọkachamara ọkachamara na ntụgharị okwu nke usoro anwale usoro KISS:
Mba, ọbụghị nke ahụ KISS -
Kkpụrụ KISS -? Mee Ka Ọ Dị Mfe, Iberibe.
Ndị a bụ nkọwa ọhụụ nke Occam's Razor, nke na-ekwu na 'ụlọ ọrụ agaghị aba ụba karịa na ọ dị mkpa, ma ọ bụ karịa n'ozuzu, 'usoro kachasị mfe na-abụ nke kachasị mma.?
Gini mere m ji agwa gi ihe a? Kedu ihe kpatara m ji adọta onye ọkà ihe ọmụma narị afọ nke 14, Ace Frehley, na onye Scotsman nwụrụ anwụ ọhụụ na blọọgụ? N'ihi na anyị ngwa-ngwa-ngwa, nkà na ụzụ, mgbe niile-na ọha mmadụ, anyị na-echefu banyere-agbalị iji dozie nsogbu na mfe ngwọta. Ọtụtụ mgbe onye ọ bụla na-achọ teknụzụ ọhụụ ma ọ bụ ụzọ ọhụụ iji dozie nsogbu mgbe anyị nwere ike iji ngwọta dị mfe nke chọrọ obere ego ma nyekwa uru dị ogologo oge ka mma.
Nkà ihe ọmụma a na-ekwu banyere atụmatụ nke ngwaahịa. Naanị n'ihi na ngwaahịa gị nwere ọtụtụ atụmatụ apụtaghị na ọ ga-egbo mkpa ndị ahịa gị. Ọ bụrụ n’inweghị obi ike na nghọta gị maka ndị ahịa gị? mkpa, i nwere a ibu, ihe isi nsogbu karịa nke atụmatụ iji mejuputa. Ikwesiri ịmatakwu ndị ọrụ gị, ndị ahịa gị, na onwe gị. Emela naanị ihe mgbaàmà. Mee ka ọ dị mfe, ma chọpụta ihe na-eme n'ezie. Ma cheta -
Oh, ma chetakwa na KISS mara ezigbo mma!